dalitrefugees: नेपालले एटम बम बनाएको होइन, संविधान बनाउँदा भारतलाई के को आपत्ति ? (भारतीय पत्रकार आनन्दस्वरुप बर्माको अन्तर्वार्ता)
नेपालले एटम बम बनाएको होइन, संविधान बनाउँदा भारतलाई के को आपत्ति ? (भारतीय पत्रकार आनन्दस्वरुप बर्माको अन्तर्वार्ता)
कम्प्युचियाको सवालमा भारतको खिलाफ भुटानले भोट दियो । भुटानले सन् १९८० मा भारतको विरुद्धमा भोट दिँदा इन्दिरा गान्धी सत्तामा थिइनन् । सन् १९७७ मा संकटकालपछि भएको चुनावपछि उनी सत्ताबाट बाहिरिएकी थिइन् । १९८० मा चुनाव भएपछि उनले फेरि जितेकी थिइन्, तर सत्तामा थिइनन् । ननएलाइन्स नेसन्समा कम्प्युचियाको सवालमा भोट भएको थियो । त्यतिबेला नेपाल, श्रीलंका, बंगलादेश सबैले भारतको विरुद्धमा भोट दिए, कम्प्युचियाको सवालमा । त्यतिबेला इन्दिरा गान्धी सत्तामा थिइनन् उनले चुनाव प्रचारका क्रममा भनिन्, 'आज यस्तो हालत भयो देशको कि भुटान जस्तो छोटो देश भारतजस्तो ठूलो देशको विरुद्ध छ । जबसम्म सानो र ठूलो भन्ने यो मानसिकता बाँकी रहन्छ, त्यति बेलासम्म राम्रो हुँदैन ।
अहिले भारतले 'गाडी रोकेर हेरौँ के हुन्छ' भनेर धम्की मात्रै दिएको हो । तर धेरै भयो, प्रतिक्रिया खराब आयो । हलचल ठूलो भएको छ, सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक बहस बनेको छ । यसैका कारण पनि स्थिति खराब हुँदैन । यो सबैका बाबजुद यदि मधेसको समस्या समाधान भएन भने देशलाई राम्रो हुँदैन । त्यसैले मधेसीलाई साथमा लिनुपर्छ ।
तर, जो सत्तामा छन्, उनीहरूको कोसिस हुनुपर्छ कि मधेसीको अन्तर्विरोधलाई कसरी समाप्त पार्ने ? यदि सत्तामा बस्नेहरूले विवेकपूर्ण निर्णय लिए भने बिस्तारै यो अन्तर्विरोध कम हुन्छ र दुवै पक्षको एकता हुन्छ । सीमांकनका क्रममा थारु एक अलग समुदायका रूपमा स्थापित भयो, पहिला सबैलाई मधेसी भनिन्थ्यो । अब मधेसी कसलाई भन्नुहुन्छ श्र के सात जिल्लामा बस्नेलाई मात्रै ? भारतमा बस्नेहरूलाई पनि को मधेसी हुन् र को होइनन् भन्ने जटिल समस्या छ । तर, सत्तामा मधेसीहरूको लामो समय प्रतिनिधित्व रहेन । जब कि तराईबाट ठूलो आर्थिक लाभ सरकारले लिन्छ । तर, सरकारमा मधेसीको हिस्साअनुसारको प्रतिनिधित्व छैन । दिल्लीमा केहीअघि भएको अन्तक्र्रियामा प्रचण्ड गएका थिए । प्रचण्डको भाषणपछि धेरैले सवाल–जवाफ गरेका थिए । एउटा कुरा स्पष्ट पारिदिउँ, प्रचण्डले भनेका थिए, 'यदि सत्तामा बस्नेहरूमा जनपक्षधरता भएन भने हामीले जस्तोसुकै संविधान बनाए पनि काम छैन ।'
- See more at: http://www.ratopati.com/interview/5464/#sthash.OMfnAlqI.vq2R28Aa.dpuf